I-Düsseldorf entsha, iBirmingham, iHelsinki, iLiverpool, iStockholm, iLondon, iParis kunye ne-Oslo iinqwelomoya zisuka eMilan Bergamo ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » I-Düsseldorf entsha, iBirmingham, iHelsinki, iLiverpool, iStockholm, iLondon, iParis kunye ne-Oslo iinqwelomoya zisuka eMilan Bergamo ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Düsseldorf entsha, i-Birmingham, i-Helsinki, i-Liverpool, i-Stockholm, i-London, i-Paris kunye ne-Oslo indiza esuka e-Milan Bergamo ngoku.
Ukudibanisa uluhlu lweendawo ezintsha, usuku lokuqala lwexesha lasebusika labona i-Eurowings yazisa uxhulumaniso kwiindawo eziphawulekayo zaseDüsseldorf kunye nebhanti yoshishino yeRuhr, ekuqaleni iqalise inkonzo yeveki ezine eziya kunyuka ukuya kwiiyure ezintandathu ngeveki ngoFebruwari. 2022. Okwangoku iRyanair yongeze iindawo ezintlanu ezintsha ezivela eMilan Bergamo - eBirmingham, eHelsinki, eLiverpool, eStockholm Arlanda naseToulouse.
Abahambi ngeenqwelomoya baya kuba neendlela ezininzi zokukhetha kunye neendawo zokuya kunangaphambili ukusuka kwisango laseLombardy kobu busika.
Isikhululo seenqwelomoya saseMilan Bergamo samkela iyonke ukuya kwabathandathu abathwali bomoya abatsha kulo nyaka.
Uqhagamshelo lukaMilan Bergamo kwihlabathi luphuculwe kakhulu kwixesha lasebusika lika-2021-22.
IMilan Bergamo ibonelela ngeendlela ezininzi ezintsha ngeli xesha lobusika, kunye nokwamkela ukuqaliswa kwakhona kunye nokunyuka kwamaza, ukubona ukhetho olungakumbi kunangaphambili ukusuka kwisango leLombardy. Ukwazisa iindlela ezintsha ezili-12-ezili-10 kuzo eziye zaziswa kwimephu yendlela yaseMilan Bergamo okokuqala - isikhululo seenqwelomoya sase-Itali siyakwamkela enye inqwelomoya entsha kwinyanga ezayo njengoko. HiSky ijoyina umnxeba.
Ukuthatha itotali ukuya kwabathandathu abathwali abatsha kulo nyaka, UMilan Bergamo iqinisekisile i-Moldovan carrier carrier (LCC), HiSky iza kube iluphucula kakhulu uthungelwano lwesikhululo seenqwelomoya ngasekupheleni kukaDisemba. Isungula amakhonkco eveki kabini eBaia Mare, eTargu Mures naseChisinau, iLCC iya kubonelela malunga nezihlalo ezingama-14,000 ngexesha le-W21/22 kwiindawo zembali kunye nezoqoqosho zaseRomania naseMoldova.
Ukudibanisa uluhlu lweendawo ezintsha, umhla wokuqala wexesha lasebusika wabona i-Eurowings yazisa uxhulumaniso kwiindawo eziphawulekayo zaseDüsseldorf kunye nebhanti yezoshishino ye-Ruhr, ekuqaleni iqalise inkonzo yeveki ezine eziya kunyuka ukuya kwii-2022 ngeveki ngoFebruwari. XNUMX. Ngeli xesha iRyanair yongeze iindawo ezintsha ezintlanu ukusuka UMilan Bergamo -I-Birmingham, i-Helsinki, i-Liverpool, i-Stockholm Arlanda kunye ne-Toulouse - ngelixa iphinda iqalise i-Düsseldorf Weeze kunye ne-Kharkiv, umthwali wase-Ireland ngoku ukhonza kwiindawo ze-107 ukusuka eLombardy.
Ukongeza kweLondon Gatwick (izihlandlo ezithathu ngeveki nge-easyJet), iParis Orly (izihlandlo ezithathu ngeveki ngeVueling), kunye ne-Oslo (kabini ngeveki noFlyr ukususela ngoJanuwari 2022), uqhagamshelwano lukaMilan Bergamo kwihlabathi luye lwaphuculwa kakhulu.
Ethetha ngezibhengezo zeenqwelomoya ezintsha kunye neendawo ekusingwa kuyo, uGiacomo Cattaneo, uMlawuli weCommercial Aviation, iSACBO uthi: “Ukubuyiswa kwetrafikhi kunye nokwakha ngokutsha uthungelwano lwethu kuyaqhubeka, kwaye njengoko siqhubeka nokuphuma kubunzima beenyanga ezili-18 ezidlulileyo, ndinebhongo kakhulu ngokwamkela iinqwelomoya ezintsha kunye neendlela. Ezi zongezelelo kuthungelwano lwethu zibonisa ukuzibophelela kwethu ekunikezeni ukhetho olungakumbi ngelixa siye saphuhlisa amaziko ethu ukuqinisekisa ukuba asilungele kuphela ukuchacha ngokupheleleyo kodwa nokwandiswa. Itheminali yethu entsha esemoyeni ngoku igqityiwe, kongezwe amasango amathandathu okukhwela, iicarousels zemithwalo kunye nentengiso eyongeziweyo. " UCattaneo uqhubeke wathi: “Utyalo-mali lwe-SACBO aluphelelanga apho. Sele siqhuba olunye uphuhliso lomhlaba. Uhlaziyo lwendawo yokungena sele iqalile kwaye kungekudala iza kulandelwa kukwandiswa kwendawo entsha kraca yokhuseleko. Ngaphandle kwekhonkco likaloliwe, i-apron enkulu esemantla kunye nendlela entsha yeteksi esemantla yonke isendleleni, utyalo-mali lukaMilan Bergamo kwixesha elizayo lucacile kubakhweli bethu kunye namaqabane ngokufanayo. "